(DHAGEYO) Wasaaradda dhalinyarada Puntland oo tababar wacyi galin ah usoo qabatay dhalinyarada gobolka Sanaag. | puntlandi.com
(DHAGEYO) Wasaaradda dhalinyarada Puntland oo tababar wacyi galin ah usoo qabatay dhalinyarada gobolka Sanaag.
(Pi Sanaag) Wasaaradda shaqada, shaqaalada iyo dhalinyarada ee dowladda Puntland oo kaashanaysay hayadda Mercy Corps iyo dallada dhalinyarada Puntland, ayaa magaalada Badhan ee xarunta gobolka Sanaag ku soo gaba gabaysay tababar lagu wacyi gelinayey dhalinyarada Puntland.
Tababarkaan oo soconayay muddo shan maalin ah islamarkaana daba socday tababaro horey loogusoo qabtay sagaaalka gobol ee Puntland ayaa waxaa lagu baranayey wacygelinta dhalinyarada iyo sidii ay fursadaha shaqo ee wadanka uga faa’iidaysan lahaayeen.
Agaasimaha waaxda dhalinyarada Puntland Deeqo Jaamac Ciise oo soo xirtay tababarkaan ayaa dhalinyaradii ka faa’idaysatay ku boorisey inay gaarsiiyaan dhalinyarada kale.
Deeqo Jaamac waxay sheegtay marka lagasoo tago tababarka inay dhalinyaarada maanta u qabteen kulan kale oo gaar ah oo ay kusoo bandhigayeen hal-abuurka ah iyo baahiyadooda si ay dowladda Puntland uga taageerto.
Waraysiga Agaasimaha waaxda dhalinyaradda Deeqo Jaamac